Ciidamo gadood ah oo qabsaday xarun wasaaradeed - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Ciidamo gadood ah oo qabsaday xarun wasaaradeed
Ciidamo gadood ah oo qabsaday xarun wasaaradeed
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Magalaada Boosaaso, Ciidan hubaysan oo ka tirsan Puntland, ayaa saaka oo Axad ah qabsaday Xarunta Wasaaradda Kalluumeysiga Puntland ay ku leedahay Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidankaas ay ka cabanayaan in aysan helin xuquuq ka maqan, ayaa isku gedaamay xarunta Wasaaradda, waxaana ay diideen in cid soo gasho ama cid ka baxdo, sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan Shaqaalaha Wasaaradda Kalluumeysiga.
Askari ka tirsan Ciidanka gadoodsan, oo diiday in magaciisa la xigto, ayaa warbaahinta u sheegay in ay ka gadoodsan yihiin kadib markii ay waayeen xaquuq loo ballan-qaaday, xilli loo diray hawlgal la xiriira la-dagaallanka Maraakiibta Jariifka ah ee Xeebaha Puntland.
Previous articleShirkada DP World oo ka hadashay heshiiska Carabta Iyo Israa’iil
Next articleDozens reported killed in clashes between Somali government, fighters